Nea Bible Ka Fa Sigyadi Ho
ASƐM A ƐDA SO Akyɛde a Ɛso Bi Nni
ASƐM A ƐDA SO Onyankopɔn Akyɛde a Ɛso Bi Nni—Adɛn Nti na Ɛsom Bo?
ASƐM A ƐDA SO Onyankopɔn Akyɛde a Ɛso Bi Nni No, Dɛn na Wobɛyɛ De Akyerɛ sɛ W’ani Sɔ?
Ɛyɛ Nhyɛ sɛ Kristofo Di Sigya?
Nkoa a Wonya Fahodi—Tete no ne Ɛnnɛ
Ɛyɛ a Yɛ Nkurɔfo Papa na Ɛbɛboa Wo
Ɔwɛn-Aban | No. 2 2017
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Yesu akɔsra Petro asebea, na wasa no yare.—Mateo 8:14, 15; Marko 1:29-31
WIASE nyinaa, ɔsom bi te sɛ Roma Katolek Asɔre, Ortodɔks asɔre ahorow, Buddhasom, ne ɔsom ahorow bi mma kwan sɛ wɔn asɔfo ne asɔre mpanyimfo bɛware. Nanso nnipa dodow no ara susuw sɛ, wei na ama nnansa yi yɛte nyamesom akannifo ne asɔfo bebree nka sɛ wɔrebu brabɔne no.
Ɛnde yemmisa sɛ, Bible hyɛ Kristofo binom sɛ wonni sigya anaa? Nea ɛbɛma yɛanya asɛm yi ho mmuae no, momma yɛnhwɛ baabi a saa ade yi fi, nea ɛyɛe a ebegyee ntini, ne Onyankopɔn adwene wɔ ho.
NEA ƐKƆFAA SIGYADI BAA NYAMESOM MU
Nyamesom mu sigyadi no, nhoma bi kyerɛ ase sɛ, “ɔsɔfo anaa nyamesomni a ne som mma kwan sɛ ɔbɛware na amma ɔne ɔbarima anaa ɔbaa anna.” (Encyclopædia Britannica) Afe 2006 mu no, Pope Benedict XVI maa ɔkasa bi kyerɛɛ Romafo asɔfokuw bi. Ɔkyerɛɛ nea enti a asɔfo nware anaa ɛnsɛ sɛ wɔne ɔbaa anaa ɔbarima da. Ɔkaa sɛ: “Wofii ase yɛɛ amammerɛ bi wɔ Asomafo no akyi pɛɛ,” na ɛno ara na wɔredi akyi.
Nanso asomafo no bere so no, na Kristofo nni amammerɛ biara a ɛhyɛ wɔn sɛ ɛnsɛ sɛ wɔware. Saa bere no, na ɔsomafo Paulo te ase. Ɔno mpo bɔɔ kɔkɔ sɛ, mmarima a wɔka “nnaadaasɛm a efi honhom mu” na “wɔbara aware” no, Kristofo no nhwɛ wɔn ho yiye wɔ wɔn ho.—1 Timoteo 4:1-3.
Ɛyɛ asomafo no akyi koraa na nyamesom mu sigyadi fii ase didi baa “Kristofo” asɔre ahorow bi mu. Saa asɔre ahorow no na akyiri yi ɛbɛyɛɛ Roma Katolek Asɔre no. Nhoma bi kyerɛɛ mu sɛ, “na suban bi afi ase regye ntini wɔ Roma Ahemman no mu. Ɛne sɛ, na nnipa bebree mpɛ sɛ wɔne ɔbaa anaa ɔbarima bɛda.” Ɛno ara bi na ebewuraa asɔre no mu.—Celibacy and Religious Traditions.
Mmere rekɔ so no, asɔfo ne asɔre mpanyimfo fii ase kaa sɛ ɛsɛ sɛ asɔfo di sigya. Ná ɛyɛ wɔn sɛ ɔbarima ne ɔbaa nna gu nipa ho fi na ɛne asɔfodwuma nkɔ. Nanso Encyclopædia Britannica kaa sɛ, “afeha a ɛto so 10 [anaa bɛyɛ mfe apem a abɛsen kɔ] yi ara mpo, na asɔfo nketewa ne asɔfo mpanyimfo no bi koraa wɔ yerenom.”
Afe 1123 ne 1139 mu no, wɔyɛɛ asɔfo nhyiam bi wɔ Rome. Ɛhɔ na ɛbɛyɛɛ mmara sɛ ɛsɛ sɛ asɔfo no di sigya. Enti efi saa bere no besi nnɛ, ayɛ mmara wɔ Roma Katolek Asɔre no mu. Kan no, na asɔfo a wɔaware no bi de tumi a wɔwɔ wɔ asɔre no mu ne asɔre agyapade gya wɔn mma. Enti mmara yi twaa saa ade no mu sɛnea ɛbɛyɛ a asɔre no renhwere n’agyapade ne ne tumi.
ONYANKOPƆN ADWENE WƆ SIGYADI HO
Sɛnea Onyankopɔn bu sigyadi no, ɛwɔ n’Asɛm Bible mu pefee. Sɛ yɛhwɛ Bible mu a, Yesu kaa sɛ ebinom dii sigya. Ɔkaa sɛ “ɔsoro ahenni no nti” na wodi sigya te sɛ ɔno Yesu. (Mateo 19:12) Ɔsomafo Paulo nso kaa biribi saa. Ɔkaa sɛ Kristofo binom asi gyinae sɛ “asɛmpa no nti,” wobedi sigya te sɛ ɔno ara.—1 Korintofo 7:37, 38; 9:23.
Nea Yesu ne Paulo kae yi nkyerɛ sɛ wɔrehyɛ Kristofo sɛ wonni sigya. Yesu kaa sɛ sigyadi yɛ “akyɛde,” na ɛnyɛ n’akyidifo nyinaa na wɔwɔ bi. Bere a Paulo rekyerɛw wɔn a wɔnwaree da ho asɛm no, ɔno ankasa mpo kaa sɛ: “Minni ahyɛde biara a efi Awurade hɔ, na mmom mereka m’adwene.”—Mateo 19:11; 1 Korintofo 7:25.
Afei nso Bible ma yehu sɛ asomafo no bere so no, na Kristofo pii yɛ awarefo. Wɔn mu baako ne ɔsomafo Petro. (Mateo 8:14; Marko 1:29-31; 1 Korintofo 9:5) Nokwasɛm ne sɛ saa bere no, na nna mu ɔbrasɛe abu so wɔ Roma ne nkurow a ɛhyɛ n’ase no mu. Enti Paulo kyerɛw kɔmaa Kristofo no sɛ, ɛsɛ sɛ ɔhwɛfo biara a waware yɛ “okunu a ne yere yɛ biako” na “ne mma brɛ wɔn ho ase ma no.”—1 Timoteo 3:2, 4.
Ná Paulo asɛm yi nkyerɛ sɛ wobetumi aware nanso wonni kwan sɛ wɔne wɔn hokafo da. Efisɛ Bible aka ama emu ada hɔ sɛ “okunu mma ne yere nea ɛsɛ no.” Afei ɛsan ka sɛ ɛnsɛ sɛ awarefo de nna ‘kame’ wɔn ho. (1 Korintofo 7:3-5) Anokwa, Onyankopɔn nhyɛɛ Kristoni biara sɛ onni sigya, na saa ara nso na mmara biara nni hɔ saa.
ASƐMPA NO NTI
Sɛ sigyadi nyɛ nhyɛ deɛ a, ɛnde adɛn nti na Yesu ne Paulo kaa ho asɛm pa? Efisɛ sigyadi betumi ama obi anya bere pii aka asɛmpa no akyerɛ nkurɔfo. Dadwen a ɛwɔ aware mu no nso, asigyafo nnya bi. Ɛno ma wotumi yɛ pii wɔ Onyankopɔn som mu.—1 Korintofo 7:32-35.
Susuw ɔbarima bi a yɛfrɛ no David ho hwɛ. Adwuma a na ɔyɛ wɔ Mexico City no, na onya sika paa. Nanso ogyae kɔɔ Costa Rica akuraa bi ase kɔkaa Bible mu asɛm kyerɛɛ nkurɔfo. David hwɛ a, sigyadi aboa no anaa? Ɔkaa sɛ: “Sigyadi aboa me paa. Mekɔe no, na ɛhɔ amammerɛ ne ɛhɔ asetena nna fam. Nanso meyɛ sigyani nti anyɛ den amma me sɛ mɛfa mu.”
Ɔbaa bi a ɔde Claudia yɛ Kristoni a odi sigya. Otutuu akwan kɔɔ mmeae a wohia asɛmpakafo. Nea ɔkae ni: “M’ani gye wɔ Onyankopɔn som mu. Sɛ mihu sɛnea Onyankopɔn hwɛ me no a, ɛhyɛ me gyidi den, na ɛma me ne ne ntam yɛ kama.”
“Ɛnyɛ aware anaa sigyadi na ehia. Nea ehia ara ne sɛ wubefi wo komam nyinaa asom Yehowa Nyankopɔn. Ɛno na ɛbɛma w’ani agye.”—Claudia
Ɛnsɛ sɛ sigyadi yɛ adesoa. Claudia san kaa sɛ: “Ɛnyɛ aware anaa sigyadi na ehia. Nea ehia ara ne sɛ wubefi wo komam nyinaa asom Yehowa Nyankopɔn. Ɛno na ɛbɛma w’ani agye.”—Dwom 119:1, 2.
Aware na Ɛma Nnipa Ani Gye Anaa?
Kristofo asigyafo ani betumi agye anaa? Bible kyerɛ yɛn aware ho adwempa a ɛsɛ sɛ yenya na ɛkyerɛ yɛn obi nso a asigyafo nyinaa betumi ahwɛ no asua no.
No. 2 2017 | Onyankopɔn Akyɛde a Ɛso Bi Nni, Wubegye Anaa?
ƆWƐN-ABAN No. 2 2017 | Onyankopɔn Akyɛde a Ɛso Bi Nni, Wubegye Anaa?
Ɔkwan Bɛn so na Mpanyimfo no Boa Yehowa Adansefo Asafo Ahorow No?